Mashandisiro eDhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (II) | Ndinobva mac
In the chikamu chimwe Mune ino posvo, isu takakuudza kuti iyo Dhijitari Kubata chimiro icho, kusvika parizvino, chaive chega kuApple Watch, yakanga yasvika iyo iPhone uye iPad nekuda kweIOS 10 uye iyo yakavandudzwa Messages app. NaDhijitari Kubata, unogona tumira vanodhirowa, kurova kwemwoyo, mabara emoto, kutsvoda uye nezvimwe kushamwari dzako uye nemhuri, zvese nematepi mashoma.
Isu tatoona maitiro ekuwana Dhijitari Kubata muMameseji, kugadzira nekutumira madhirowa kana kumaka mavhidhiyo nemifananidzo kutumira kune vatinosangana navo. Muchikamu chechipiri ichi tichaona zvimwe zvatingaite nebasa iri rakakura.
1 Tumira zvinobata, kutsvoda, uye kurova kwemoyo
2 Unoda kudzidza zvakawanda nezveMeseji muIOS 10?
3 Isu tinokoshesa sei iyo nyowani iOS 10 Meseji app
Tumira zvinobata, kutsvoda, uye kurova kwemoyo
Pane mhando dzakasiyana dzekuratidzira dzaunogona kushandisa neDhijitari Kubata, imwe neimwe iine zvakasiyana mhedzisiro. Iwe unogona kutumira kutsvoda, kurova kwemoyo, kubata, fireballs uye nezvimwe zvakawanda. Heino runyorwa rwezviratidzo zviripo uye nezvamuchawana nazvo nazvo.
Isa chigunwe pachiratidziro kuti utange kudhirowa.
Nekamwe kamwe chete kemunwe unogona kutumira denderedzwa "zvinobata" zvemavara akasiyana, zvichienderana nezvawasarudza.
Tumira fireball nekuchengeta kubata kwakasimba nemumwe munwe pachiratidziri.
Tepa yeminwe miviri inotumira kutsvoda. Tinya kakawanda kuti utumire kutsvoda kwakawanda.
Chengeta zvigunwe zviviri pachiratidziri uye iwe unozotumira kurova kwemoyo.
Bata zvigunwe zviviri pachiratidziri uye wozodhonzera pasi kuti utumire moyo unorova wobva watsemuka nepakati.
Kutumira zvirimo kubva kuDhijitari Kubata kunogona kuitwa chete pa iPhone ine iOS 10 kana wachi yeApple inewatchOS 2 kana 3, asi inogona kutariswa pamadivaysi eIOS neshanduro dzakapfuura dzeiyo inoshanda sisitimu, uye paMac kubva kuApp zvinyorwa.
Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti ese Dhijitari Kubata gestural maturusi anogona kusanganiswa kugadzira yakasarudzika midhiya meseji uye kuigoverana neshamwari uye mhuri, nokudaro kuita kutaurirana kunakidze.
NOTA: Dhijitari Kubata mameseji ndeechinguva. Dzinozodzimwa mushure memaminetsi mashoma kutoti "save" yakadzvanywa mumawindo meseji yekuvachengeta zvachose.
Unoda kudzidza zvakawanda nezveMeseji muIOS 10?
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve nyowani mameseji uye iOS 10 maficha:
Maitiro ekutumira-ruoko manotsi muMameseji eIOS 10
Mashandisiro ekushandisa iyo nyowani iOS 10 yekukiya skrini (I)
Mashandisiro ekushandisa iyo nyowani yekukiya skrini yeIOS 10 (II)
Mashandisiro ekushandisa mitsva Meseji mhedzisiro muIOS 10 (I)
Mashandisiro ekushandisa mitsva Meseji mhedzisiro muIOS 10 (II)
Maitiro ekuisa uye kushandisa zvitambi muMameseji eIOS 10 (I)
Maitiro ekuisa uye kushandisa zvitambi muMameseji eIOS 10 (II)
Isu tinokoshesa sei iyo nyowani iOS 10 Meseji app
Neraki, vazhinji vedu takakwanisa kuyedza ese matsva maficha uye mashandiro eMessage yeIOS 10 kubva muna Chikunguru apfuura Apple yakaburitsa yekutanga tambo vhezheni yevashandisi vakanyoreswa mukambani yeruzhinji beta chirongwa. Kunyangwe zvakadaro, panguva ino shanduko uye zvitsva zvaisagona kuongororwa nechikonzero chiri nyore: havasi vese vashandisi vaive neIOS 10. Zvino sezvo hurongwa hwakatomisikidzwa zviri pamutemo, zvakakosha kuti uzive kuti shanduko yave yakazara . Iko hakuna kana musarirwi wekuti ndeapi mameseji aive mukutanga kwawo, uye isu tinogona kutaura kuti takatarisana nechishandiso chitsva iyo inokoka chaizvo kuti ishandiswe seye nyowani huru mameseji app.
Ichokwadi zvakare kuti zvimwe zvehunhu hwayo, kunyanya zvimiti, chimwe chinhu chave chiri mune mamwe maapplication kwemakore. Asi zvachose, Apple yakwanisa kugadzira yega yega yega yezvinhu zvitsva ive yayo.
Iye zvino panongova nedanho rimwe chete, kuti mameseji ave Anoshanda ese. Iwe unofunga isu tichazviona izvi rimwe zuva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Mashandisiro ekushandisa Dhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (II)
Iyo inopenya nhema nhema 7 haisi inonyanya kukurudzirwa